Global Voices teny Malagasy » Miaro sy mampiroborobo ny hany fiteny kreôla mifototra amin’ny espaniola any Azia ny bilaogy ‘Bien Chabacano’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Septambra 2018 14:45 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Filipina, Fiteny, Mediam-bahoaka, Tanora, Tantara, Tsidika, Rising Voices
Lapan'ny Tanana ao Zamboanga Filipina. Sary tao amin'ny Flickr avy amin'i JC Tuclaud (CC BY-NC-SA 2.0).
Ny Chabacano, iray amin'ireo fiteny miisa 170 any Filipina, izay be mpampiasa indrindra any amin'ny tanàndehiben'i Zamboanga farany atsimo ary miavaka amin'ny maha fiteny kreôla tokana mifototra amin'ny teny Espaniola any Azia azy. Mba hiarovana sy hampiroboroboana ny Chabacano, noforonina ny bilaogy ‘Bien Chabacano’  ho loharanom-baovao an-tserasera ho an'ireo Filipiana sy tsy Filipiana liana amin'ny fianarana ny fiteny:
Izy io dia mikasika ny Chabacano ao Zamboanga. Bien Chabacano no bilaogy voalohany sy tokana natokana ho an'ny mpankafy ny fiteny Chabacano izay miady hevitra sy manadihady ny fiavian'ny fiteny Chabacano, ny fitsipi-pitenenana Chabacano, sy ny voambolana, ary ny maro hafa !
Nanazava ny aingam-panahiny tamin'ny fanombohana ny tetikasa i Jerome Herrera, ny mpamorona ny bilaogy ‘Bien Chabacano':
Maniry ny hampirehareha sy hampivoatra ny fahaizana miteny Chabacano eo amin'ireo tanora miteny Chabacano ny Bien Chabacano amin'ny alàlan'ny firesahana momba ny tantarany manankarena sy marevaka ary manazava ny fahasarotana sy ny fahasamihafana misy eo amin'ny fitsipi-pitenenany .
Amin'ny maha fiteny kreôla azy, ny Chabanaco dia fitambaran'ny fiteny Espaniôla sy ny fiteny indizeny izay nivoatra tamin'ny tantaran'ny fifandraisana ara-panjanahantany nisy teo amin'i Espaina sy Filipina. Tombanana fa maherin'ny 600.000 ireo mpiteny Chabacano ao amin'ny firenena ankehitriny.
Zanatany Espaniola i Filipina nandritra ny taonjato telo nanomboka tamin'ny taona 1565 ka hatramin'ny taona 1898. Saingy tsy toy ireo zanatany fahiny tany Espaina fa tsy nampianarina tao Filipina ny fiteny Espaniola. Fa kosa nampiditra ny fivavahana Kristiana sy nitondra ny firenena tamin'ny alàlan'ny fianarana ny fiteny indizeny ao Filipina ny mpitondra fivavahana sy ny manampahefana.
Nanjaka tao amin'ny vondronosin'i Filipina iray manontolo i Espaina saingy nifanehitra tamin'ny fanoherana avy tamin'ny vondrona indizeny sasany. Tany amin'ny nosy atsimon'i Mindanao izay nanana mponina Miozolomana betsaka no nametrahan'ny tafika Espaniola ny tobin'ny mpitandro filaminana teo akaikin'i Zamboanga, ary nampiasaina ho toerana fototra hanafihana ireo Miozolomana ao Mindanao izany taty aoriana. Na izany aza, tsy nahavita nifehy tanteraka an'i Mindanao nandritra ny fanjanahany an'i Filipina i Espaina.
Ny biraon'ny sampandraharahan'ny fahasalamana ao Zamboanga manasongadina ny teny filamatra hoe: “Nuestro deseo un ciudad sin enfermedad” (Ny fanirianay, tanàndehibe lavitry ny aretina). Sary sy fanazavana avy amin'ny Bien Chabacano, nahazoana alalana.
Nandalina  ny tantara marevaky ny Chabacano sy ny niandohany tao Zamboanga ny Profesora John M. Lipski, avy ao amin'ny Oniveristem-panjakana Pennsylvania Etazonia :
Ny teny Chabacano dia vokatry ny fihaonam-pampitomboana izay tsy nivoaka raha tsy any amin'ny faritra iray izay nanana ny fahasamihafam-pitenenana misongadina ao amin'ny faritra. Endriky ny fileferana ara-pitenenana sy ara-kolontsaina ny Chabacano, fiteny iray izay mihalehibe hatrany ny mpiteny azy sy ny fiantraikany eo amin'ny politika sy sosialy.
Mampianatra ny mpamaky ireo teny tsotra indrindra sy ny fehezanteny  fototra amin'ny teny Chabacano ny bilaogy ‘Bien Chabacano’. Manasongadina hira  malaza sy tantara fohy  izy, ary hita ao mihitsy aza ny dikanteny Chabacano ny boky Little Prince . Indro ny fandikanteny  Chabacano ny andalana voalohany  amin'ny boky Little Prince. Diniho ny fitovizany amin'ny fiteny Espaniola:
Raha mbola vao enin-taona aho dia nahita sary mahafinaritra tao amin'ny boky iray antsoina hoe Tantara Marina avy amin'ny Natiora momba ny ala ltranainy. Ny sarin'ny bibilava boa iray eo am-pitelemana ny biby iray izy io. Indro misy dika mitovy amin'ilay sary.
Sarin'ny dokambarotry ny tranom-boky ao an-tanandehiben'i Zamboanga nosoratana tamin'ny teny Chabacano izay nidika ara-bakiteny hoe: “Hiseho tsy ho ela ny toerana lavorary ho anao.” Sary sy fanazavana avy amin'ny Bien Chabacano, nahazoana alalana.
Alefan'ny bilaogy ny mpamaky hivantana mankany amin'ny tranonkala sy ny pejin'ny media sosialy ampiasaina ny fiteny Chabacano sy ny fandaharan’onjam-peo , tati-baovao amin'ny fahitalavitra  , ary ny fanambaran'ny governemanta  .
Manolotra fitantarana fohy momba ny tantaran'ny Chabacano ny bilaogy, ny tsindrim-peony  samihafa manerana ny faritany Zamboanga sy ny fiantraikan'ny fifindra-monina ary ny fanaovana ho maoderina ny toe-karena  eo amin'ny fivoarany. Mitaraina  momba ny tsy fisian'ny ezaka ifanakonana hampandrosoana ny Chabacano ihany koa ny bilaogy:
Mampahonena ny toerana misy ny Chabacano ankehitriny. Aleo hampanenoako ny lakolosy fanairana dieny izao ! Ho avy ny andro izay tsy hitenenana ny fiteny Chabacano afa-tsy ao an-tokantrano ihany raha tsy hoe angaha misy ny fametrahana ezaka lehibe kokoa atao amin'ny fiarovana. Mampalahelo io faminaniana io fa tsy hoe tsy misy lanjany akory.
Amin'ny alàlan'ny sehatra an-tserasera toy ny ‘Bien Chabacano’ dia antenaina fa hiteraka hafanam-po bebe kokoa ao Filipina izany ary hanentana ireo mpianatra sy ny mpisera aterineto hianatra, hampiasa ary hanohy hampivelatra ny fiteny Chabacano.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/09/18/126127/
 tantara fohy: https://bienchabacano.blogspot.com/p/chabacano-short-stories.htmlmedia%20https://bienchabacano.blogspot.com/p/chabacano-media.html
 andalana voalohany: https://drive.google.com/file/d/1uFS6HgNY5c2JiOTmRG9UtzqSOl1wlFzA/view
 tati-baovao amin'ny fahitalavitra: https://www.facebook.com/tvpchavacano/
 fanaovana ho maoderina ny toe-karena: https://bienchabacano.blogspot.com/2013/09/a-new-breed-of-chabacano-speakers.html